Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 8)
Big Sur oo la jaan qaadaya Mac-kayga, kaaliyaha horumariyaha iyo waxyaabo kaloo badan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Toddobaadkan wuxuu la yimid xoog weyn oo muhiim u ahaa isniintii la soo dhaafay qaab dhismeedka WWDC haddana waxaan ku soo gabagabeynaynaa usbuuca warar dheeri ah
14 Florida Apple Stores waxay xirayaan albaabadooda Sababtoo ah soo ifbaxa kiisaska Coronavirus
Toddobaadyadii la soo dhaafay, inta badan Bakhaarrada Apple ee adduunka ku yaal ayaa caadi ku soo noqday ...
Kiiboodh dib looga ceshan karo MacBooks waa patent-ka cusub ee Apple. Patent-kan ayaa muujinaya kumbuyuutar dib loo habeeyay oo loogu talagalay Mac-yada
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu layaabka badnaa ee ka dhacay WWDC bishii Juun 22, ayaa ahayd ku dhawaaqista socdaalka Intel ee labada sano ee Apple Silicon. Sababta: Skylake
Marka waxaad ku rakibi kartaa macOS Big Sur Macs aan la taageerin
Beta-kii ugu horreeyay ee macOS Big Sur waa soo baxay. Waad ku rakibi kartaa Mac-ga oo aan si rasmi ah u taageerin adoo raacaya casharradan.
Saldhiga kuleylka AirPower wuxuu kusii socdaa inuu ka muuqdo shabakada
Xisaabta Twitter-ka ee l0vedream waxay muujineysaa sawirro taxane ah oo ku saabsan saldhiga amraya shirkadda Apple ee AirPower oo hawl buuxa ku jira
Muuqaal cusub oo loogu talagalay taxanaha Codka Yar ayaa hadda la heli karaa
Telefishanka Apple TV + YouTube wuxuu ku soo daray filim cusub oo loogu talagalay taxanaha 'Little Voice', taxane ku imaan doona adeegga fiidiyowga ee 'streaminmg' bisha Luulyo 10.
Apple waxay iibsataa Fleetsmith, oo ah barxad lagu maareeyo Mac iyada oo loo marayo daruuraha
Iibsiga Apple ee Fleetsmith waa rasmi. Qalab kuu oggolaanaya inaad ka maamusho kombiyuutar kasta daruurta
Apple waxay ku martiqaadeysaa dadka isticmaala inay tijaabiyaan beta-ka HomePod
Apple waxay soo saareysaa casuumaad taxane ah qaar ka mid ah isticmaaleyaasha si ay isugu dayaan shaqada beta ee cusub ee barnaamijka loogu talagalay HomePod
Qalab cusub ayaa ku dari doona "codka meelaha" AirPods Pro
Qalab cusub ayaa ku dari doona "dhawaaqa meelaha" AirPods Pro. Way fududahay in qalabka la beddelo, waxaana hab cod ah lagu darayaa AirPods Pro.
Soo koobida wax kasta oo ay Apple ku soo bandhigtay fiidiyowga
Apple waxay ku siisaa kanaalka YouTube-ka maalintii ugu horreysay ee WWDC 2020 oo lagu soo koobay wax ka yar laba daqiiqo.
Aaladaha ay Apple shalay gelisay khaanadda
Aaladaha ay Apple shalay gelisay khaanadda. AirTags, HomePod mini, 24-inch iMac, iyo AirPods Studio ayaan ka soo muuqan xafladii shalay.
Halkan waxaad mar kale ku arki kartaa furaha WWDC 2020
Haddii sababo jira awgood aad u arki kari weyday furaha Apple-ka shalay qaab dhismeedka WWDC 2020, waa kuwan xiriiriyeyaasha si aad u arki karto
HomePod wuxuu la jaan qaadi doonaa adeegyada muusikada ee qeybta saddexaad
Sidii aan u aragnay inta lagu jiro maalinta furitaanka ee WWDC, HomePod wuxuu la jaan qaadi doonaa adeegyada muusikada ee dhinac saddexaad socda
Podcast 11 × 41: Falanqaynta WWDC 2020
Kani waa Podcast-ka aan duubnay habeenki WWDC 2020 ee muhiimka ah asxaabteena ka socda Actualidad iPhone. Ma waayi kartid tan
watchOS 7 waa la jaan qaadi kartaa sida Apple Watch Series 3
Marka aan ogaano waxa ku cusub watchOS 7, waxaa muhiim ah in la ogaado noocyada Apple Watch ee la jaan qaadi kara noocyadan cusub ee watchOS.
Apple Silicon macnaheedu maaha in Intel la dayrin doono
Markuu ahaa WWDC 22-keedii, Tim Cook wuxuu ku dhawaaqay u dhaqaaqista Apple Silicon, isagoo Intel ka reebay isla'egta. Sagootintan ma noqon doonto mid deg deg ah
macOS Big Sur: wax walboo ay ku sharaxeen Duruusta
macOS Big Sur: wax walboo ay ku sharaxeen Duruusta. macOS Catalina waxay ku wareejisay macOS Big Sur. Aan aragno warka ay keento.
Maxaa ku cusub HomeKit iyo hagaajinta siyaasadaha asturnaanta
Shaqadan WWDC shaqooyin cusub ayaa loogu daray HomeKIt sidoo kale waa wax laga badalay, si weyn ayay u hagaajineysaa asturnaanta dadka isticmaala Apple
Maxaa ku cusub iPadOS 14 WWDC
IPadOS cusub oo si isa soo taraysa ugu eg iPad-ka ilaa Mac. Waxaan ku sii dhowaaneynaa mashiin ku fiican naqshadeeyaha iyo isku celceliska isticmaalaha
CarPlay, Apple Pay, oo ka saxiix Apple. Cusub: Clip App
Sidoo kale ku cusub CarPlay, Apple Pay iyo sheeko cusub oo loo yaqaan 'Clip App' oo lagu soo bandhigay Apple's WWDC 2020. Astaamo cusub oo faa iido badan
Macruuf cusub14. Warka ugu weyni waa Widgets-ka
Macluumaadka cusub ee iOS 14 ee lagu soo bandhigay WWDC 2020 waxaa la dhihi karaa in sheekada cusub ay tahay Widgets-ka. La beddeli karo, la heli karo oo shaqeynaya.
Kala-guurka ka imanaya Intel una wareegaya processor-ka ARM ayaa soo dhowaanaya, Apple wuxuu diiwaangelinayaa nooca Rosetta
Ka guurista Intel ee loo gudbinayo ARM waxay u baahan doontaa emulator u oggolaanaya barnaamijyada Intel ee ku shaqeeya processor-ka ARM iyo Rosetta inay mar kale noqon karto emulator-kan
Jebinta xanta WWDC: macOS Big Sur
Jebinta xanta waxay tilmaameysaa wararka lagu soo bandhigi doono WWDC. Waxa ugu xiisaha badan ayaa noqon doona macOS Big Sur nidaamka cusub ee hawlgalka.
Kuo wuxuu saadaaliyay ARM iMac iyo 13-inji ARM MacBook Pro sanadkaan. Waxay tiri waxaa lagu soo bandhigi doonaa WWDC 2020 waxaana la sii deyn doonaa Q4 2020.
WWDC 2020: Maxay Tahay Sida Ugu Badan ee La Bilaabi Karo Galabtaan
Waxaan dib u eegeynaa wararka hubaal in lagu soo bandhigi doono WWDC khadka tooska ah ee 2020 ee siiyay wax badan in laga hadlo beryahan dambe.
Erayo adag oo ka socda Congressman oo ku saabsan xaaladaha App Store
Dhowr saacadood ka hor WWDC 2020, ereyada qalafsan ee xildhibaan ayaa la ogaa, oo ku saabsan xaaladaha App Store ee loogu talagalay horumarinta
Raac WWDC 2020 nala noolaaw
Waxaan joognaa xilligii ugu muhiimsanaa kadib dhowr todobaad asagoo xan, xogo iyo waxyaabo kale. Maanta waa maalinta WWDC 2020 waxaan kugu sugeynaa nolosheena
Tim Cook iyo difaaca xuquuqul insaanka ee Trump
Tim Cook wuxuu ku hadlayaa wareysi uu siiyay CBS, maahan WWDC ee soo socota, laakiin wuxuu ku hadlayaa muhiimadda ay leedahay difaaca xuquuqda madaniga ah
Disney + mar dambe ma bixiso bil tijaabo ah oo bilaash ah
Adeegga madadaalada ee qulqulka, Disney + ayaa ku dhawaaqay in isticmaaleyaasha cusub aysan mar dambe ka faa'iideysan doonin ...
Sawirro cusub oo loogu talagalay MacBook Pro iyo SSD cusub oo loogu talagalay Mac Pro, "bilaash" AirPods iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Dhowr saac ka hor inta aan la gaarin nuxurka gaarka ah ee WWDC ee sanadkan 2020 ayaa bilaabmaya, waxaan idinla wadaageynaa waxyaabaha muhiimka ah ee aan ka imid Mac
Apple waxay xireysaa qaar ka mid ah dukaamada Mareykanka sababo la xiriira dillaaca COVID-19
Apple waxay xireysaa qaar ka mid ah dukaamada Mareykanka sababo la xiriira dillaac ka dhashay COVID-19. Sannad masiibo ah oo loogu talagalay dukaamada Apple ee Mareykanka.
Si fudud u beddel codka Siri ee ku saabsan Mac-gaaga
Sideen ugu beddeli karnaa codka Siri si fudud oo dhaqso leh Mac-ga? Maanta waxaan ku tusaynaa sida aad ugu samayn karto kombuyuutarkaaga
Apple wuxuu u sameeyaa goleyaal cusub horumariyeyaasha
Ka dib markii usbuucii la soo dhaafay Apple ay xirtay golayaasha horumarinta, hadda way furan yihiin oo si buuxda ayaa loo cusboonaysiiyay
AirPower way ka dhowaan kartaa sidii hore
Waxay u muuqataa in AirPower ay rumoobi karto iyadoo aan sugin waqti dheer, sida ku cad wararka xanta ah ee uu bilaabay Jon Prosser
Sarkaalka ugu sareeya shirkada Apple Christie Smith ayaa ka tagtay shirkada
Madaxa kala duwanaanta Apple, Christine Smith, ayaa ku dhawaaqday inay ka tagayso shirkadda si ay waqti badan ula qaadato qoyskeeda
Xerada Apple (Guriga) sidoo kale waxay noqon doontaa khadka tooska ah
Sannadkan xerada Apple waxay sidoo kale khadka ka noqon doontaa sababta aan dhammaanteen u naqaan. Meel wanaagsan oo waxbarasho oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 8 iyo 12 sano
Kanaalka YouTube-ka ee Apple ayaa hadda si toos ah ugu shaqeeya barnaamijka WWDC
Kanaalka Apple ee ku yaal YouTube wuxuu horeyba u leeyahay xiriiriyaha si uu u sii wado muhiimada WWDC ee sanadkan 2020
Apple waxay ku qabsatay Barcelona iyadoo kireysa xafiisyada Passeig de Gràcia
Kiraynta dhismaha cusub ee Barcelona ee shirkadda Apple. Xaaladdan oo kale, meel aad ugu dhow Bakhaarka ku yaal Passeig de Gràcia
Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha tartanka ardayda Swift Kahor WWDC 2020
Apple waxay ku dhawaaqday guuleystayaasha Swift Student Challenge ka hor WWDC 2020. 350 wiilal iyo gabdho isugu jira oo daafaha dunida ka kala yimid ayaa la siiyay.
Podcast 11 × 40: Hal toddobaad laga bilaabo WWDC 2020
Hal usbuuc oo dheeri ah, kooxda Actualidad iPhone iyo kooxda Soy de Mac ayaa kulmay si ay u duubaan dhacdo cusub oo ka mid ah Todo Apple Podcast.
Qalabkan Mac ee laga soo qaado 'MountLab' waa mid weyn.
Qalabkan USB-C-C-ga ah ee loogu talagalay Mac, oo ay abuureen shirkadda 'MountLab' oo loo yaqaan 'HHHHHR', waa mid fudud oo waxtar leh.
Apple waxay la wareegtay xuquuqda caalamiga ah ee xiisaha Israel ee Tehran
Apple waxay iibsatay xuquuqda qaybinta caalamiga ee taxanaha Tehran, taxane isku dhafan basaasnimada iyo dembiyada si isku mid ah.
Fantastical 3.1 ee Mac (iyo inta kaleba) oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan guriga
Nooca cusub ee kalandarkaan iyo maareeyaha howlaha, Fantastical 3.1 wuxuu ku darayaa howlo cusub si loo fududeeyo shaqada guriga
Mammoth, Monterey ama Skyline waxay noqon karaan magacyada macOS 10.16
Waqtigaan la joogo, haddii Apple ay adeegsato magacyada ay weli ku diiwaan gashan tahay magaceeda, magacyada macOS ee suurtogalka ah waxay noqon karaan Mammoth, Monterey ama Skyline
Jarmalka ayaa bilaabaya barnaamijka Apple iyo Google App ee wadajirka ah toddobaadkan
Codsiga loo abuuray in looga hortago infekshannada loo yaqaan 'coronavirus infections', oo ay si wadajir ah u wadaagaan Google iyo Apple, ayaa toddobaadkan laga bilaabi doonaa Jarmalka
Apple waxay ku xasuusinaysaa furitaanka WWDC 2020 waxayna dib u dhigeysaa Abaalmarinta Naqshadeynta Apple iyo shaybaarada «1v1» toddobaad
Apple waxay ku xasuusinaysaa furitaanka WWDC 2020 waxayna dib u dhigeysaa Abaalmarinta Naqshadeynta Apple iyo shaybaarada "1v1" muddo toddobaad ah. Muhiimad gaar ah oo aan lahayn dhagaystayaal. Ma la duubayaa?
App Store iyo Apple Pay waxaa baaray diidmo ka timid Komishanka Yurub
Mar labaad baadhitaan ka dhan ah kalsoonida ayaa waxaa furay Guddiga Yurub ee ka dhanka ah Apple iyo App Store iyo adeegga Apple Pay
Astaanta mataleysa iMac-ka cusub waxaa laga heli lahaa lambar iOS 14 ah
Wararkii ugu dambeeyay ee laxiriira iMac 2020, waxaan kaheleynaa astaamaha Mac-kan, oo ah astaan ​​laga heli karo lambarka iOS 14.
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo isku xirnaanta otomaatiga ah ee WiFi ee macOS
Waxaan ku tusineynaa ikhtiyaarka aad ku dhaqaajineyso ama aad ku shaqeyneyso isku xirnaanta otomaatiga ah ee shabakadda WiFi guriga, shaqada ama meel kasta oo ka mid ah Mac-gaaga
watchOS 7 waxaa lagu soo bandhigi doonaa WWDC 2020 iyada oo la soo bandhigi doono sheekooyinkan cusub
watchOS 7 waxaa lagu soo bandhigi doonaa WWDC 2020 iyada oo wararkan suurtagalka ah. Wicitaano cusub, qaabka ilmaha, Oximeter, kormeeraha hurdada iyo CarKey.
Mac: Had iyo jeer iibso asalka. Iska ilaali Hackintoshkan cusub
Hackintosh cusub ayaa ka muuqatay goobta. Kumbuyuutarka iyo shirkada sameysay labadaba aad looguma kalsoonaan karo. Ka digtoonow khiyaanooyinkaas macquulka ah
Apple miyuu bilaabi karaa Studio-ka AirPods ee WWDC?
Ma arki karnaa Studio-ka cusub ee AirPods Studio oo looga dhawaaqay WWDC? Solo Beats Pro iyo Powerbeats ayaa lagu iibinayaa suuqa Mareykanka
Dukaanka Apple ee ku yaal Glasgow ayaa beddelay magaciisii
Apple waxay bedeshay magaca Dukaanka Apple ee ku yaal Glasgow iyadoo laga takhalusi doono midab takoor kasta. Hadda waxay kaliya tilmaamaysaa goobtaada.
Filimkii ugu horreeyay ee dukumiintiyo aabbeyaal ah oo soo baxa 19-ka Juun ee TV-ga Apple +
Waxaan horeyba u helnay filimka ugu horreeya ee dokumenteriga Aabayaasha, oo ah dukumiinti dukumiinti ah oo ka soo muuqan doona Apple TV bisha Juun 19.
Blackmagic, Powerbeats Pro dukaamada, iMac yaraanta, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Markale Axadda waan nasaneynaa oo si deggan ayaan dib u eegi karnaa qaar ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee usbuuca ee ka socda Mac
Mac-da ugu horreysa ee leh ARM ma noqon kartaa 12-inch MacBook Pro?
Xanta cusub ayaa sheegeysa in Mac-da ugu horeysa ee leh processor-ka ARM uu noqon doono 12-inch MacBook Pro iyo in lagu arki doono WWDC June 22
Apple TV + Little Voice ayaa bilaabaya 10-ka July
Cudurka faafa ee ka dhasha coronavirus wuxuu dib u dhigay soo saarida tiro badan oo wax soo saar ah, sidaa darteed ...
Qaar ka mid ah Dukaamada Apple ee UK iyo Waqooyiga Ireland ayaa furi doona Isniinta
Inta badan Dukaamada Apple ee Boqortooyada Midowday iyo midka Waqooyiga Ireland waxay albaabada u furi doonaan Isniinta, Juun 15
Apple wuxuu ku dhawaaqayaa Jadwalka Toddobaadka WWDC 2020
Apple wuxuu ku dhawaaqayaa jadwalka usbuuca WWDC 2020. Toddobaadkii in ka badan 1.000 shirar barnaamijyo iyo golayaal ay la socdaan XNUMX injineerada Apple ah.
Apple TV + siideynta filimka Tom Hanks Greyhound bisha July 10
Greyhound, filimka Apple TV + ee uu jilayo Tom Hanks, si loogu soo bandhigo adeegga fiidiyowga ee qulqulka bisha July 10
Jim Keller, injineerkii hore ee Apple, wuxuu iska casilay jagada Intel
Injineerkii hore ee Apple Jim Keller, oo ka mid noqday shaqaalaha Intel, ayaa hadda ku dhawaaqay inuu ka tagayo kan dambe.
Apple waxay dhiirrigelisaa Hindisaha Sinnaanta iyo Cadaaladda
Tim Cook wuxuu ku shaaciyey Twitter-ka qorshe cusub oo ku saabsan Sinaanta Jinsiga iyo Caddaaladda iyadoo maalgashi bilow ah uu yahay 100 milyan
Apple waxay u heellan tahay la dagaallanka xadgudubka carruurta
Apple waxay qayb ka tahay Isbahaysiga Teknolojiyada ee la dagaallama xadgudubka carruurta ee lagu sameeyo internetka iyo shabakadaha bulshada
Caawinaad cusub oo loogu talagalay "Horumarinta Apple" si ay u soo sheegaan cilladaha
Caawinaad cusub oo loogu talagalay "Horumarinta Apple" si ay u soo sheegaan cilladaha. Tilmaame ka caawiya horumariyeyaasha inay soo gudbiyaan warbixintooda cilladaha la helay.
Taxanaha Dickinson wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Peabody ee Qaybta Madadaalada
Taxanaha Apple TV + Dickinson wuxuu noqday taxanihii labaad ee Apple TV + ee ku guuleysta abaalmarin laga helo warshadaha telefishanka.
Apple waa shirkadii ugu horaysay ee gaadha qiime dhan 1.5 tiriliyan.
Apple waa shirkadii ugu horaysay ee Mareykan ah ee awood u yeelatay inay gaarto qiimaha suuqa 1.5 tiriliyan waxaana la filayaa inay sii kordho
Juun 21, Maalinta Caalamiga ee Yoga: Caqabadda cusub ee Apple Watch
21-ka Juun si loogu dabaaldego Maalinta Caalamiga ee Yoga, Apple waxay soo bandhigi doontaa tartan gaar ah oo ku saabsan Apple Watch. Helitaankeeda adiga ayey ku jirtaa
IMac wuxuu ku bilaabmayaa inuu ku yaraado Mareykanka, isagoo xaqiijinaya cusbooneysiinta suurtagalka ah ee WWDC 2020
Kuwo badan ayaa xanta ah oo bilihii la soo dhaafay tilmaamaya cusboonaysiin bilic leh oo ku saabsan baaxadda iMac. Ugu dambeeyay…
AirTags waxay umuuqataa in lawaayay iyadoo ay jiraan warar xan ah oo Mac ah
Xanta ku saabsan AirTags waxay ahayd kaliya, warar xan ah. Hadda ka dib markii Gurman soo daatay maalmahan wali wax war ah kama hayno
Xayiraad badan iyo kooxo yar yar oo ka shaqeeya Apple Park
Koobka Cupertino waxay ku diyaarinayaan dib ugu noqoshada xafiisyada iyo xarumaha la shaqeynta kooxo yar oo dad ah si looga fogaado infekshinka sida ugu macquulsan.
11 × 39 Podcast: WWDC waxay heshaa Toasty
Qeybtan 39-aad ee barnaamijkeenna Podcast-ka waxaan uga hadlaynaa wararkii dhowaanahan la isla dhexmarayay ee ku saabsanaa imaatinka Chips-ka loo yaqaan 'ARM chips' ee loo yaqaan 'MacBooks', 'iMac' oo dib loo habeeyay iyo waxyaabo badan
Holland iyo Sweden ayaa dib u furay Apple Store maanta 10
Dukaanada Apple ee Holland iyo Sweden ayaa albaabada loo furi doonaa berri 10 bisha June. Waxay horey u fureen in kabadan kuwa wali xiran.
Sida loogu beddelo Amarada Terminalka Codsiyada
Beddelidda amarrada Terminal waa hawl aad u fudud oo dhakhso badan oo noo oggolaan doonta inaan waqti badan ilaalino oo wax soo saar badan yeelanno.
Sida loogu wareejiyo calaamadaha bogga Firefox loona wareejiyo Safari
Haddii aad rabto inaad ka wareejiso calaamadaha aaladda Firefox una wareejiso Safari, halkan waxaa ku yaal laba hab oo loo sameeyo si dhakhso ah oo aan dhib lahayn.
Cayayaanka qariibka ah wuxuu ka hortagaa kuwa aan Mareykanka dhisin inay cusboonaysiiyaan Apple Developer
Cayayaanka qalaad ayaa ka hor istaagaya kuwa wax horumariya ee ka baxsan Mareykanka inay cusbooneysiiyaan Apple Developer. Bixinta kaarka amaahda caalamiga ah waa la diiday.
Tilmaam cusub oo ka timid Apple oo doorbideysa “Nolosha Madoow ee Arrinta ah” ee Khariidadaha Apple
Apple waxay cusbooneysiisay Khariidadaha Apple iyo sawirrada darbiga lagu xardhay waddada caanka ah ee "Black Lives Matter" oo hadda laga daawan karo dayax gacmeedka.
Blackmagic wuxuu joojiyaa iibinta Pro Raden RX Vega 56 eGPU
Soo saaraha Blackmagic, wuxuu naga dhigayaa qashinkeena noocyo badan oo kaararka sawirada dibedda ah si loogu xiro Mac-dayada haddii ...
Faransiiska ayaa furi doona Dukaankiisa Apple oo bilaabanaya berri
Laga bilaabo berrito, Apple waxay dib u fureysaa dhammaan Dukaammada Apple ee ay ku lahayd guud ahaan Faransiiska, iyadoo saacado la dhimayo
Maanta dhammaan Dukaammada Apple ee waddankeenna way furan yihiin
Dhammaan dukaamada Apple ee waddankeenna ayaa maanta albaabada loo furay kadib dhowr bilood oo ay xirnaayeen cudurka faafa ee coronavirus
Apple waxay ku maalgelin kartaa Mac-gaaga Apple Card
Apple waxay qorsheyneysaa in dadka isticmaala Apple Card ay iibsan karaan aaladaha shirkadda sida Mac ama iPad oo ay maalgeliyaan iyaga oo aan dulsaar laheyn.
Dukaanka Apple ee Imaaraadka Carabta ayaa furmaya 8-da Juun
Saddexda Apple Stores ee Imaaraadka Carabta ayaa albaabada loo furi doonaa laga bilaabo Juun 8, ka dib markii la xiray sababo la xiriira COVID-19
Bililiqo billow ah dukaamada Mareykanka, dukaamo laga furayo Spain iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadka ugu horreeya ee Juun wuxuu ku dhammaanayaa dhowr waji oo furan oo ku yaal Apple waxaanan kugu tusi doonnaa soo koobid toddobaadkan ah
Apple ayaa soo saareysa "Kheyraadka Maareeyaha Sirta" si loo horumariyo
Apple waxay soo bandhigtay mashruuc cusub oo softiweer ah oo furan oo loo yaqaan 'Password Manager Resources', oo loogu talagalay ugu horeyn kuwa horumariya
Hada waxaa laga heli karaa Apple TV + warqada to docuserie
Waxaan horeyba u haysanay waxyaabo cusub oo loo heli karo Apple TV +. Markan waa docuseries ay jilayaan dad caan ah
Saamiyada Apple ayaa sii kordhaya sida xumbada
Apple waxay maamushaa inay jabiso diiwaanno cusub oo ku saabsan qiimaha saamiyada. Markan waxay gaadhay meeshii ugu sarraysay 328 dhibcood umana muuqato inay halkaas ku joogsanayso
Tani waxay noqoneysaa ku noqoshada shaqada Apple Park kadib xiritaanka
Tani waxay noqon doontaa ku soo noqoshada shaqada Apple Park ka dib markii la xiray. Waxay si iskood ah u qaadan karaan baaritaanka coronavirus ka hor inta aysan shaqada ku laaban
Dukaammada Apple ee xidhan ayaa noqda shiraacado aan rasmi ahayn si loola dagaallamo cunsuriyadda
Mudaaharaadyada ka dhashay geerida George Floyd ayaa qaar ka mid ah Dukaamada Apple u rogay shiraado aan rasmi ahayn oo ay ku jiraan farriimo dhiirigelin ah, mudaaharaad iyo la dagaallanka midabtakoorka
Podcast 11 × 38: WWDC ee nagu sugeysa MACiLustrated
Qeybtii 38aad ee xilligii kow iyo tobnaad ee All Apple Podcast, waxaan ka helnay wiilasha ka yimid MACiLustrated sida martida.
Kastamka Mareykanka ayaa qabtay shixnad AirPod been abuur ah
Kastamada Mareykanka ayaa qabtay shixnad AirPods been abuur ah. Apple marwalba way dhibtoon jirtay dhibaatada been abuurka ah, kiisaska illaa AirPods.
Walgreens iyo Apple waxay siiyaan $ 50 kuwa cusub ee Apple Card isticmaala
Shirkadda Walgreens ayaa heshiis la gashay Apple waxayna u soo celin doontaa lacag dhan $ 50 dhammaan dadka cusub ee adeegsada Apple Card illaa dhammaadka Juun
Beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 13.4.8 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa Beta Kobciyeha koowaad ee tvOS 13.4.8 oo leh horumarin xagga amniga ah iyo ciladaha cilladaha leh
Dareemayaasha baabuurka iswada ee Apple ayaa ku shaqeyn kara riwaayad
Shati cusub ayaa ka digaya suurtagalnimada in dareemayaasha gawaarida iswada ee Apple ay ugu shaqeeyaan qaab isku dubaridan iyo xitaa LiDAR
Berri dukaamada Apple ee Spain ku yaal ayaa mar kale la furayaa
Afar dukaan oo Apple ah oo ku yaal Spain ayaa furmi doona berri kadib bilooyin la xiray sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus-ka adduunka
Gaadiidka dadweynaha ee Hong Kong hadda waxaa lagu bixin karaa Apple Pay
Apple Pay waxay horeyba ula jaanqaadi jirtay kaarka gaadiidka dadweynaha ee Hong Kong Octopus, kaas oo kuu ogolaanaya inaad iska bixiso safarada xitaa haddii iPhone uusan laheyn batteri.
Apple Music wuxuu ku biirayaa ololaha Black Out Talaadada si loola dagaallamo cunsuriyadda
Apple waxay ku biirtay ololaha Talaadada 'Black Out Tuesday' iyada oo loo marayo Apple Music, halkaas oo kaliya xulashada daawada ee muusikada madow laga ciyaaro.
Apple waxay abaalmarin ku siisaa saynisyahan cilmiga kombuyuutarka 100.000 $ soo gudbinta khaladka amniga
Apple waxay abaalmarin siineysaa saynisyahan cilmiga kombuyuutarka 100.000 $ soo sheegista cillada amniga. Cilad markii aad isticmaaleysid Aqoonsiga Apple ee barnaamijyada-saddexaad iyo websaydhada.
Sidoo kale bisha Juun waad dib u dhigi kartaa lacagaha Apple Card
Apple iyo Goldman Sachs ayaa sidoo kale u oggolaan doona kuwa aan awoodin bixinta bil kasta ee kaarka Apple inay dib u dhigaan bisha Juun
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa geerida George Floyd wuxuuna ku dhawaaqay tabarucaad dheeri ah
Cook wuxuu iska taaganyahay dilkii George Floyd qoraal gudaha ah wuxuuna rajaynayaa in tabarucaad maaliyadeed oo sare la samayn doono.
30-ka Juun, MacBook-ka ugu horreeya ee leh muuqaalka isha ayaa loo arki doonaa inuu yahay mid duugoobay
Laga bilaabo Juun 30, kii ugu horreeyay ee 15-inch ah oo loo yaqaan 'MacBook Pro' oo leh muuqaalka 'retina' ma sii heli doono nooc kasta oo taageero ah Apple
Apple wuxuu maal galiyaa in kabadan 330 milyan oo doolar oo loogu talagalay horumarinta bandhigyada microLED
Maalgelin cusub oo xoog leh oo ka socota Apple soosaarka iyo horumarinta baalayaasha microLED ee Taiwan.
Sida loo furo bog internet Safari ah biraawsar kale
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Safari laakiin aadan si sax ah u wada geli karin dhammaan bogagga internetka ee aad aragto, waxaan ku tusi doonaa sida loo xalliyo dhibaatadan.
Xidhitaanka ka dib dib u furida bakhaarada bililiqo darteed
Ka dib markii ay furteen Apple Stores-ka Mareykanka, oo u xirnaa in mudo ah COVID-19 awgeed, shirkada ayaa hada markale u xirtay bililiqo darteed.
Taxanaha Apple Watch 6 Laguma Darin Micro LED
Xanta cusubi waxay muujineysaa in Apple Watch Series 6 ee soo socdaa ay u badan tahay inuusan kor u kici doonin shaashadda Micro LED oo uu u sii socon doono sidii hore.
Dhowr Dukaan oo Apple ah ayaa lagu bililiqeystey Mareykanka mudaaharaadkii George Floyd
Dhowr Dukaan oo Apple ah ayaa lagu bililiqeystey Mareykanka mudaaharaadkii George Floyd. Iyagoo ka faa’iideysanaya rabshadaha waddooyinka, dhowr dukaan ayaa la bililiqaystay.
Zoom waa inaysan ku suuq geyn asturnaanta isticmaaleyaasha
Zoom wuxuu qorsheynayaa inuu cusbooneysiiyo codsigiisa adoo kordhinaya heerka sirta laakiin kaliya bixinta macaamiisha. Iyada oo amniga aan la suuq geyn karin
Horey ayaa taariikh loogu talagalay barnaamijka Apple TV + ee taxanaha ah "Ted Lasso"
Horay waxaa u jirtay taariikh majaajillada cusub ee ka soo muuqan doonta Apple TV + taas oo u sheegi doonta xiisaha England ee tababare Ted Lasso
AirPods Pro light sensor, furitaanka dukaanka Apple iyo waxyaabo kaloo badan. Waxa ugu fiican usbuuca ee Soy d eMac
Toddobaadkan waxaan la imaaneynaa sacab mug leh oo warar xiiso leh oo aan ku aragnay waxaan ku jiraa Mac. Hada waad ku aqrisan kartaa si degan oo Axada waad ku raaxeysan kartaa
Tile wuxuu ku eedeynayaa Apple dhaqamada anshaxa ka hor Midowga Yurub
Saabuunta opera ee u dhexeysa Tile iyo Apple ee qalabkooda ayaa ka gudbay balli, wuxuu gaadhay EU. Tile wuxuu soo diray warqad uu ku eedeynayo Apple inay ka soo horjeeddo tartanka.
Garsooruhu wuxuu diiday dacwadii ka dhanka ahayd TV-ga Apple TV + ee xatooyo taxane ah 'Adeeg'
Qaadiga ayaa diidey dacwada ka dhanka ah Apple TV + ee ku saabsan xatooyada taxanaha "Adeeg". Agaasime Filim Talyaani ah ayaa qaba inuu yahay nuqul ka mid ah filimkeedii 2013
Sida loo furo galka calaamadeysan ee tabs-ka si deg deg ah
Hal ikhtiyaar oo aan ku heli karno calaamadaha Safari ayaa ah inaan dhowr bog ka furanno tabs isla mar ahaantaana. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
Elago wuxuu soo bandhigayaa kiis cusub oo loogu talagalay AirPods qaabka Mini Cooper
Shirkadda AirPods ee Elago samaysay ayaa si rasmi ah u soo saartay kiis cusub oo loo yaqaan 'Mini Cooper'
Gal Gadot inuu ku jilo taxanaha Hedy Lamarr ee Apple TV +
Atariishada Wonder Woman ayaa ka soo muuqan doonta taxanaha cusub ee Apple TV iyada oo ku saleysan nolosha atariishada Hedy Lamarr
ARM MacBooks way imaan kartaa si ka dhakhso badan sida aan filayno
Wax walba waxay tilmaamayaan imaatinka processor-ka cusub ee ARM sida ugu dhakhsaha badan halkii ugu dambaysay ee loogu talagalay qaar ka mid ah MacBooks. Ma ahaan laheyn kooxaha ugu awooda badan
Xerada Xagaaga ee Apple ayaan la qaban karin Sannadkan
Dhibaatada caafimaad ee coronavirus ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta mid ka mid ah howlaha waaweyn ee xagaaga, xeryaha Apple
Apple waxay iibsatay shirkad barashada mashiinka si loo hagaajiyo Siri
Iyada oo ay jiraan shirkado badan oo Apple ay iibsatay sanadihii la soo dhaafay, si ay u horumariso Siri, waxay umuuqataa wax cajiib ah inay wali waxtar yartahay sidii 2011.
Tani waxay noqon doontaa xargaha maqaarka cusub ee Loop loogu talagalay Apple Watch
Noocyada cusub ee maqaarka Loop ee loo yaqaan 'Loop straps' oo Apple qorsheyneyso inay soo bandhigto, waxay ku dareysaa midabyo cusub iyo isbeddel naqshad ah
Waxay Apple ka dacweeyaan 2600 bilyan qalad ka dhacay FaceTime
Shirkadda Escobar Inc. ayaa ka dacweysay Apple jabinta qandaraaska oo ay weydiisatay 2.600 milyan, markii ay heshay cillad xagga amniga ah oo ku dhacday FaceTime
11 × 37 Podcast: Jeelbreak markale… Ma jiraa qof daneeya?
Jailbreak wuxuu mar kale ka soo muuqanayaa goobta dadka isticmaala ee doonaya inay ku sameeyaan aaladaha ay ku shaqeeyaan ee iOS-ka iyo podcastapple-ka aan uga hadlayno, miyaad nagu soo biiri doontaa?
Sida loo wadaago "Airtime" inta udhaxeysa qalabkaaga Mac iyo iOS
Waxaan ku tusineynaa sida aad barkinta uga kicin karto ama aad u dhaqaajin karto Waqtiga Hawada ee Mac-gaaga si markaa loola wadaago qalabka intiisa kale ee IOS ee isticmaala isla koontada.
Apple waxay iibsataa xuquuqda dhammaan qeybaha asalka ah ee Fraggle Rock
Tan iyo markii la bilaabay Nofeembar 1, 2019, adeegga fiidiyowga ee Apple ayaa ...
Apple waxay dib u fureysaa ku dhowaad 100 dukaanno Mareykan ah toddobaadkan
Apple ayaa dib u furi doonta ku dhowaad 100 dukaan oo ku yaal Mareykanka toddobaadkan. Mucas ahaan ma awoodi doontid inaad gasho wali, laakiin uguyaraan waxay horeyba adeeg uga bixin doonaan laamiga.
Apple Pro Display XDR wuxuu ku guuleystay abaalmarinta "Bandhigga Sanadka"
Apple wuxuu ku guuleystey abaalmarinta shaashadda ugufiican sanadka 2020 mahadnaqa Pro Display XDR. Shaashad wanaagsan marka loo eego waxqabadka iyo qiimaha.
Saamiyada Apple ayaa soo ceshaday qiimihii ay ku lumiyeen Covid-19 awgeed
Saamiyada Apple ayaa soo ceshaday qiimihii ay ku lumiyeen Covid-19 awgeed. Qiimaheeda suuqa ayaa hada la mid ah sidii uu ahaa Janaayo.
Xanta ugu dambeysa ee laxiriirta shaashadda yar-yar ee LED-ka ee Apple qorsheyneyso inay ku adeegsato Mac-yada soosocda waxay xaqiijineysaa inaysan imaan doonin ilaa 2021
Dukaankii ugu dambeeyay ee Apple oo aan weli albaabadiisa ka furin Australia, midka ku yaal George Street ee magaalada Sydney, ayaa albaabada loo furi doonaa 28-ka Maajo
Jarmalka, Switzerland, Latvia iyo Estonia waxay sheegeen inay qaateen Apple iyo Google API
Jarmalka, Switzerland, Latvia iyo Estonia waxay durba bilaabeen adeegsiga API-ga wada jirka ah ee ay abuureen Apple iyo Google si loo joojiyo faafitaanka coronavirus.
Apple waxay caawisaa adeegyada dayactirka ee idman
Apple waxay la xiriirtaa adeegyada dayactirka idman oo leh qalab ilaalin shaqsiyeed iyo qalab kale
Muraayadaha Apple-ka ayaa diyaar u ah in la soo bandhigo sannadka 2021-ka
Ma ahan rasmi laakiin waa ku dhowaad. Muraayadaha Apple sida ku xusan dhammaan wararka xanta ah ayaa la bilaabi karaa sanadka soo socda
Laba Dukaan oo Apple ah oo ku yaal Japan ayaa furmi doona toddobaadkan
Dukaammada Apple ee Japan si loo furo
Ma arki karnaa isbahaysi mustaqbal oo u dhexeeya Apple iyo Google?
Kadib wada shaqeynta Apple iyo Google ee barnaamijka COVID-19, Sundar Pichai wuxuu ku andacooday in iskaashigan uu sii dheeraan karo mustaqbalka.
Naqshadeeyehii hore ee Apple ayaa soo saaray afhayeenkiisa 'Cell' si uu ula tartamo HomePod
Naqshadeeyehii hore ee Apple ayaa bilaabay codkiisa "Cell" si uu ula tartamo HomePod. 21 sano ka dib naqshadaynta shirkadda Apple, Christopher Stringer wuxuu doonayaa inuu sameeyo afhayeen u gaar ah.
Apple TV + ma koriyo inkasta oo waqti badan lagu qaato guriga
Aafada caalamiga ah ee uu abuuray coronavirus-ka kamay caawin Apple TV + inay ku koraan tirada dadka isticmaala, laakiin shaashadda ayey ku wadaagaan.
watchOS 6.2.5, Apple wuxuu kaydiyaa tillaabooyinka kahortagga iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Mar labaad waxaan kuu soo qaadaneynaa isku soo koobid yar oo ay kujiraan qaar kamid ah wararka ugu wanaagsan usbuuca ee aan ka imid Mac.
Xayeysiin loogu talagalay AirPods ayaa ku guuleysatay abaalmarinta «Farshaxanka Agaasimaha Fanka»
Xayeysiin loogu talagalay AirPods ayaa ku guuleysatay abaalmarinta "Naadiga Agaasimaha Fanka". Haddii aad shaqaaleeysid hal-abuurka ugu fiican oo aadan miisaaniyadda ka saarin, badanaa way dhacdaa.
Si dhakhso ah oo fudud sawiro uga soo dejiso degel kasta barnaamijkan
Imisa jeer ayaad isku dayday inaad sawir ka soo degsato degel ma hubisay sida looga soo qaatay bogga ...
Sida loo suurtogeliyo kumbuyuutarka marin u helka ee macOS
Apple waxay ku dartay dhowr horumarin kumbuyuutarka marin u helka maantana waxaan ku tusineynaa sida loo kiciyo si loogu isticmaalo Mac-gaaga
Fikradda IMac ee leh Aqoonsiga Face iyo Magic Trackpad ee la jaan qaadi kara qalinka Apple
Waxaan ku tusineynaa fikrad ah sida iMac-ka cusub ee 2020 uu noqon karo, haddii Apple damacsan tahay inay cusbooneysiiso naqshadda Mac-kan.
Dukaamada Apple ee Isbaanishka waxay kordhiyeen faa'iidadooda 73% sanadka 2019
Dukaamada Apple ee Isbaanishka waxay kordhiyeen macaashkooda 73% sanadka 2019. Expansión wuxuu daabacay tirooyinka dukaamada Apple ee Isbaanishka sanadka 2019.
Barnaamijka Podcast ee Google ayaa hadda taageera CarPlay
Waad ku mahadsantahay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ku saabsan barnaamijka Google Podcast, waxaan ugu dambeyn ku isticmaali karnaa barnaamijka Google Podcast barnaamijka CarPlay.
Xarunta Apple ee Texas waxay yeelan doontaa hudheel shaqaale
Shaqaalaha taga xerada Apple ee ku taal Austin, Texas, waxay yeelan doonaan hudheel qiyaastii 200 qol u ah hoygooda
Midabada cusub ee Powerbeats Pro ayaa u dhow
Xanta joogtada ah ee ku saabsan imaanshaha midabada cusub ee Powerbeats Pro ayaa naga dhigeysa inaan u maleyno inay ku dhow yihiin in la bilaabo
Barnaamijka wadajirka ah ee Apple iyo Google ayaa hadda laga heli karaa 23 dal.
Codsiga ay abuureen Google Record iyo rikoodhka ay ku joojinayaan fiditaanka coronavirus-ka ayaa durba laga bilaabay 23 wadan. In Spain ugu dhakhsaha badan.
Sida laga soo xigtay ACSI, Apple ayaa hogaamisa heerka qanacsanaanta ee macaamiisha Mareykanka
Daraasadii ugu dambeysay ee ay sameysay ACSI waxay muujineysaa natiijooyin wax ku ool ah oo Apple ah marka loo eego tusmada qanacsanaanta macaamiisha ee Mareykanka
Muraayadaha Apple ayaa loogu yeeri doonaa Apple Glass waxayna ku kacayaan $ 499
Xanta cusub ee ku saabsan Apple muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay waxay sheeganayaan in loogu yeeri doono Apple Glass, waxay ku kacaysaa $ 499 iyo waxyaabo kale oo badan
Apple Watch Taxanaha 6 Fikradood oo Dhab Noqon Karta
Fikradda Apple Watch Taxanaha 6 oo run noqon karta. Xaalad isku mid ah, isla suun, laakiin leh muuqaal qurux badan oo aan lahayn jilibyo.
Istuudiyaha 'AirPods Studio' ayaa la bilaabi doonaa in la soo ururiyo sanadkan
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, Studio-yada Airpods waxay ka bilaabi doonaan isku imaatinka Vietnam sanadkan si loogu diro Apple dabayaaqada deyrta.
Logitech wuxuu soo bandhigayaa Muuqaalka Wareegga Muuqaalka Kaamirada Amniga oo la jaan qaadi kara Fiidiyowga Hubi ee HomeKit
Logitech waxay si rasmi ah u soo bandhigtay balanqaadkeeda cusub ee kaamirooyinka amaanka ee la jaan qaada Apple's HomeKit Secure Video.
Darajo: Apple ayaa ku jirta kaalinta 4aad ee Fortune 500
Majaladda Fortune ayaa mar kale soo saartay darajada loo yaqaan Fortune 500 halkaas oo lagu xisaabtamayo 500 ee shirkadood ee ugu qiimaha badan Mareykanka.
Xadhigga Kibirka cusub ee loogu talagalay Apple Watch. Nike ayaa lagu daray.
Apple waxay sii deysay laba xarig oo midabbo kala duwan leh oo midabkiisu yahay Apple Wacth maalinka Kibirka. Nike markii ugu horeysay wuxuu leeyahay mid u gaar ah.
Kuwani waa xarkaha isboortiga cusub ee UAG Apple Watch
Urban Armor Gear ayaa hadda si rasmi ah u soo bandhigtay laba nooc oo cusub oo ka mid ah kooxaha Apple Watch, oo labaduba ka samaysan yihiin silikoon leh xiritaan xadhig caadi ah.
Apple waxay horey u suuq gaysay khadka Eero Mesh WIFI ee dukaankiisa internetka
Apple waxay horey u suuq gaysay khadka Eero Mesh WIFI ee dukaankiisa internetka. Router iyo ku celceliyaha barta marin si loo abuuro shabakadda Wi-Fi ee gurigaaga.
Shaqaalaha Apple, cusbooneysiinta Logic Pro X, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaan idinla wadaagi doonnaa dhammaantiin hal maalin oo Axad ah oo lagu daray qaar ka mid ah wararka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple waxay la kulmi kartaa dhibaatooyin muddo gaaban ah
Apple waxay arki kartaa xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhaxeeyay Shiinaha oo yaraaday sababo la xiriira tallaabooyinka dhaqaale ee uu soo rogay Donald Trump
Talyaanigu wuxuu dib u furi doonaa qaar ka mid ah Dukaankiisa Apple 19-kii Maajo
Talyaanigu wuxuu dib u furi doonaa albaabada qaar ka mid ah Bakhaarradiisa Apple illaa 19-ka Maajo.
Waxaad hadda ka heli kartaa shabakadda 'Spotify' oo leh Safari
Waxaad hadda ka heli kartaa shabakadda 'Spotify' oo leh Safari. Ka dib saddex sano oo is-waafajin ah, waxaad hadda ka heli kartaa bogga 'Spotify' ee ka socda Safari.
Apple wuxuu xaqiijinayaa iibsashada shirkadda xaqiiqda dalwaddii ee NextVR
Iibsigii ugu dambeeyay ee Apple ee la xiriira xaqiiqda la kordhiyay waxaa laga helaa xaqiijinta rasmiga ah ee iibsashada NextVR
Muraayadaha Apple ayaa imaan kara laga bilaabo 2022
Sida laga soo xigtay falanqeeye Ming-Chi Kuo, xaqiiqda horeyba loo hadal hayey ee ah in muraayadaha Apple-ka ay ku dhici karaan suuqa horaantii 2022
Afar midab oo macquul ah oo loogu talagalay Powerbeats Pro
Apple wuxuu ku dari karaa liiskiisa midabada Powerbeats Pro afar midab oo cusub oo aad uga xiiso badan kuwa ay hada haysato
Shaqaalaha Apple ayaa dib ugu laaban doona goobahooda shaqo dhawaan
Waxay u muuqataa in Apple ay go'aan ka gaari doonto sida ugu wanaagsan ee shaqaalaha loogu celin karo goobahooda shaqo laga bilaabo bisha Juun.
Cynthia Hogan, madaxa fulinta ee shirkadda Apple ayaa ka baxday shirkadda
Cynthia Hogan, oo kamid ah xiddigaha Apple ee saxiixyada dunida siyaasada, ayaa hada shaacisay inay ka baxday shirkada si ay uga shaqeyso ololaha madaxtinimada Joe Biden.
Podcast 11 × 35: Xanta ku saabsan iPhone 12 iyo Studio AirPods
Waxaan la wadaageynaa qeybta cusub ee podcastapple ee aan sameyno habeenka Talaadada. Toddobaadkan dhowr war iyo mowduucyo xiiso leh, ha moogaanin.
Waxaa jiri kara nooc ah "Apple Glasses" oo ah naqshad fudud
Waxaa jiri kara nooc ku saabsan miisaanka fudud "Apple Glasses". Prosser wuxuu xaqiijinayaa in Apple ay soo saartay laba nooc oo muraayadaha indhaha ah. Qaar HMD iyo kuwa kale ayaa iftiimiya.
Jiilka labaad ee qalabka AirPods ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2D15
Jiilka labaad ee AirPdos ayaa hadda helay cusbooneysiin cusub oo firmware ah, in kastoo faahfaahinta aan la aqoon.
Sida dib loogu bilaabo Apple Watch markii aysan ka jawaabin
Marka barnaamijkeena Apple Watch uu joojiyay ka jawaabida badhamada iyo shaashadda, ikhtiyaarka kaliya ee aan u harnay waa inaan dib u bilowno
Sida loogu daro calaamadeynta galka cinwaanka Safari
Haddii aynaan doonayn calaamadeenayada Safari inay noqdaan Duurjoogta Duurjoogta ah, waa inaan ku keydinnaa calaamadaha cusub galka ay ku jiraan.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Istuudiyaha AirPods ee ay Apple soo bandhigi doonto goor dhow
Apple waxay kudiyaar garoobi laheyd soosaarida Studio-yadeeda cusub ee AirPods, oo sameecadaha kula tartami lahaa Beats Studio
Apple waxay 300 milyan ku maalgelinaysaa shirkad ku takhasustay Mini-Led
Apple waxay maalgashi ka badan 300 milyan oo yuuro ku sameysay shirkad ku takhasustay soo saarista Mini-Led oo xarunteedu tahay Taiwan
Tilmaamaha ugu wanaagsan ee kumbuyuutarrada loo yaqaan 'macOS Finder'
Haddii aad si joogto ah u qaadato saacado ka badan intii aad ku qaadan lahayd Finder abaabulka faylasha, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqti aad ku isticmaasho tuubbooyinka kumbuyuutarka
Wax soo saarka Apple wuxuu doonayaa inuu ka baxo Shiinaha
Apple waxay dooneysaa inay joojiso ku tiirsanaanta wax badan ee Shiinaha ee soo saarida qalabkeeda sidaa darteedna waxay si toos ah u bilaabeysaa soo jeedinteeda si loogu kordhiyo Hindiya
Tani waa sida AirPods ay uga kacday Apple sida uu sheegay Greg Joswiak
Madaxweyne ku xigeenka Apple ee Suuqgeyntu waxay na xasuusinaysaa habka loo sameeyo AirPods. Sida iyaga laftoodu ula yaabeen aqbalaadiisa.
Sida loo xiro, dib loo bilaabo, oo loo hakiyo Mac-gaaga adigoo adeegsanaya toobiye kumbuyuutar
Iyada oo la adeegsanayo toobiyaha kumbuyuutarrada, waxaad si dhakhso leh u xidhi kartaa Mac-gaaga, dib u bilaabi kartaa, ama seexan kartaa adigoon isticmaalin menus-ka macOS.
Fiidiyowyada "Maanta Apple guriga jooga" hadda waxaa laga heli karaa waddankeenna
Kulamada "Maanta Apple guriga" waxaa hadda lagu heli karaa cinwaanno af Isbaanish ah oo ku jira websaydhka Apple ee waddankeenna
Dukaanka Apple ee Switzerland ayaa furi doona Talaadada soo socota
Dukaamada Apple ee Switzerland, wadar ahaan afar, waxay albaabada u furi doonaan mar kale 12-ka Maajo, Talaado saacado gaar ah
Falanqeeyaha Apple Jon Prosser wuxuu ku dhiiranayaa inuu dhaho sameecadaha cusub ee Apple-ka ah ee maqalka ah ayaa ugu dambeyn loogu yeeri doonaa AirPods Studio
MacBook Pro 2020, taariikhda WWDC 2020 iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Axada labaad ee bisha May waxay noo keeneysaa warar muhiim ah kiiskan waxaan dooneynaa inaan idinla wadaagno waxyaabaha muhiimka ah
Midkoodna Tim Cook iyo kuwa kale midkoodna uma imaan doono Sun Valley sanadkaan
Xerada xagaaga ee lagu qabtay Sun Valley, oo ay kaqeybgaleen kuwa ugu awooda badan shirkadaha waaweyn ee adduunka, waa la joojiyay.
Websaydh cusub oo Apple Books ah oo loogu talagalay qorayaasha si buuxda ula jaan qaada Mac
Apple waxay soo saartay degel cusub oo ay ku caawineyso qorayaasha inay qoraan buugaagtooda ayna awood u yeeshaan inay ku daabacaan Apple Books.
AirPod-yada cusub ayaa suuqa soo gali doona kahor dhamaadka 2020
Jiilka seddexaad ee AirPods ayaa ku dhici kara suuqa ka hor dhamaadka sanadka oo aan aheyn 2021 sida falanqeeyayaasha kala duwan ay tilmaamayaan.
Dukaanka Apple ee Jarmalka ayaa albaabada loo furi doonaa 11-ka bisha May
Dukaanka Apple ee soo socda ee albaabada loo furi doono waa kuwa ku yaal Jarmalka, waxayna ku sameyn doonaan saacado yar
Apple waxay maalgelinaysaa $ 10 Million oo dheeraad ah si loola dagaallamo cudurka Coronavirus
Apple waxay 10 milyan oo doolar ku maalgelinaysaa shirkad sameysa xirmooyinka lagu ogaado Covid-19. Copan Diagnostic wuxuu ku kordhin doonaa wax soo saarkiisa lacagtan%
Kuo: Apple kuma dari doono bandhigyada Mini-LED illaa 2021
Kuo: Apple ma soo bandhigi doonto shaashadda Mini-LED illaa 2021. Waxay u muuqataa in soo saaridda baallayaashan ay dib u dhacday, mana muuqan doonaan illaa sannadka soo socda.
Jon Prosser wuxuu sheeganayaa Apple TV cusub oo 4K ah oo leh processor A12X ayaa soo dhacaya
Jon Prosser wuxuu ku andacooday in Apple TV 4K cusub oo wata processor A12X uu wadada ku jiro. processor ka badan iyo laba jeer RAM ka badan qaabka hadda jira ee 4K.
Alison Kirkham waxay ku biirtay Apple TV + kana socota BBC
Apple waxay dooneysaa inay diirada saarto sameynta dokumentariyada Apple TV + taasna waxay ka kireysay Alison Kirkham BBC iyo madaxa Planet Earth
Tufaaxa: Sumadda ka tagta saameynta ugu badan dadka isticmaala
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa lagu cabiray saameynta shucuureed ee nooca Apple ku leeyahay dadka isticmaala. Natiijada kama yaabin doonto taageerayaasha wax badan.
Apple wuxuu nagu qaadanayaa booqasho ku saabsan Jamestown moonbase oo ka socda taxanaha 'All Humanity'
Fiidiyow halka Apple ku tusiyo waxa aasaasiga ah ee dayaxa Jamestown ee NASA ay ka dhistay taxanaha Aadanaha oo dhan wuxuu u eg yahay
Nuxurka sanadkan ee WWDC ayaa noqon doona midka ugu muhiimsan
WWDC-da sanadkan waxay yeelan doontaa furitaan gaar ah oo furayaal badan oo horumariyayaal ah kuwaas oo inta badan ka soo qayb gala munaasabadda sanad walba.
Ku dhowaad dukaan kasta oo Apple ah oo ku yaal Australia ayaa dib loo furaa Khamiista
Dukaanka Apple ee Australia ayaa albaabada loo furi doonaa Khamiistaan ​​marka laga reebo kan ku yaal magaalada Sydney oo dhismihiisu socday ilaa bishii Janaayo. Ku furida tallaabooyin badan oo gaar ah
Awoodda Powerbeats Pro 2 waxay ku dhowdahay inay suuqa gasho
Wararkii ugu horreeyay ee laxiriira himilada Apple ee ah inay soo saarto noocyo badan oo dhagaha dhagaha la gashado oo hoos yimaada astaanta ...
11 × 34 Podcast: MacBookga Faa'iidooyinka cusub, WWDC 2020 iyo More
Podcast-kii ugu dambeeyay waxaan uga hadalnay moodooyinka cusub ee 'MacBook' ee Apple ay ku shaacisay degelkeeda, wararka ku saabsan in WWDC 2020 ay noo keeni doonto ...
WWDC 2020 waxaa la qaban doonaa Juun 22
Waxaan horeyba u haysanay taariikh cayiman oo loogu talagalay shirka horumarinta ee la qaban doono bisha Juun. WWDC 2020 waxay noqon doontaa Juun 22
Vienna Apple Store ayaa noqon doonta dukaankii ugu horeeyay ee laga furo Yurub kadib coronavirus
Dukaanka Apple oo ku yaal magaalada Vienna, Austria, ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Apple Store ah ee laga furo Yurub ka dib markii uu xirmay sababa coronavirus.
Jon Prosser waa Apple-ka cusub ee Mark Gurman
Warka Apple wuxuu ka yimaadaa meelo badan oo qaab xanta ah laakiin waxaa iska cad inay jiraan dad leh fursad helitaan oo midkood uu yahay Jon Prosser.
Khaladaadka Beddelka Sawirka MacOS wuxuu Saameeyaa Codsiyo Badan
Khaladka gudbinta sawirka macOS wuxuu saameeyaa dhowr codsi. Haddii ay sawirro ka soo dejiyaan aalado kale, waxay kordhin karaan cabirka fayl kasta
Wareegyo, taxanihii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee laga helo Apple TV +
Musalsalkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah oo hadda laga helo Apple TV waxaa lagu magacaabaa Wareegyo (Isku day) waana majaajilo ka kooban 8 qaybood xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay
Gawaarida kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'macOS Podcast app'
Haddii aad tahay isticmaale joogto ah Apple Podcasts oo waliba aad caadeysatay inaad adeegsato tuubbooyinka kumbuyuutarka, waxaad xiiseyn kartaa inaad ogaato kuwa aan kugu soo bandhigno qodobkaan.
Tim Cook wuxuu la hadlayaa ardayda ka qalin jabisay Jaamacadda Ohio
Tim Cook wuxuu kaqeyb qaatay khudbadii furitaanka ee qalinjabinta ardayda Jaamacadda Ohio State. Hadal lagu calaamadeeyay masaafad
MacBook Pro soo socda wuxuu noqon karaa 14 inji oo leh awood weyn
MacBook Pro soo socda wuxuu noqon karaa 14-inch oo leh awood sare. Processor badan, RAM badan iyo awood badan, iyo kororka shaashadda ee suurtogalka ah.
Apple waxay kuu ogolaaneysaa inaadan bixin lacagaha bisha Maajo ee Apple Card
Kuwaas isticmaala Apple Card ee maraya marxalado adag oo dhaqaale, waxaa laga yaabaa inay dib u dhigaan bixinta kaarka bisha Maajo bilaa dulsaar
Xanta AirPods, dukaanka Apple wuu furan yahay iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Dhammaadka usbuuc dhammaadka badan oo naga mid ah oo Jimco fasax leh. Ma aanan seegin ballanta oo waxaan sii deynay sida ugu fiican usbuuca aniga oo ka socda Mac.
Xakamey batteriga qalabkaaga Bluetooth-ka ee ku jira Mac-gaaga
La soco batteriga qalabkaaga Bluetooth-ka ah ee ku jira Mac-gaaga. Haddii qalabkaagu uusan ahayn Apple, waxaa jira dhowr codsi oo kaa caawin kara.
Apple-ka Mareykanka ee COVID-19 App waa la cusbooneysiiyay
Apple waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda COVID-19 nooca 3.0 iyadoo ay la socoto talooyin cusub oo ku saabsan xirashada wejiga wajiga iyo macluumaad cusub oo ka socda CDC
Australia iyo Austria ayaa dib u furi kara Dukaammadooda Apple toddobaadyo gudahood
Marka lagu daro qaar ka mid ah Apple Stores oo ku yaal Mareykanka, dukaamada Apple ee Australia iyo Austria ayaa albaabada loo furi karaa toddobaadyo yar gudahood.
Sida ugu dhakhsaha badan e-mayl loogu qoro Boosta
Gawaarida kumbuyuutarka si loo qoro emayl si dhakhso leh oo wax soo saar leh iyadoo la adeegsanayo codsigii boostada ee Apple.
Apple waxay soo dirtay 7,5 milyan oo waji ah
Apple waxay ku dhawaaqayaan inay u direen 7,5 milyan shaashadood aduunka oo dhan kuwa ka dagaalamaya jiida hore ee ka hortaga coronavirus
Apple wuxuu ku dari karaa ikhtiyaarka ikhtiyaarka ah ee iMessage
Apple waxay xareysay shey loo aqoonsan yahay in dadka isticmaala iMessage ay wax ka beddeli karaan farriimaha lagu soo diray arjiga.
Apple wuxuu soo saaraa fiidiyoow ah sida "Oak" Felder uga shaqeeyo barnaamijkiisa 'MacBook Pro' ee Logic Pro X
Apple wuxuu daabacaa fiidiyoow ah sida "Oak" Felder uga shaqeeyo barnaamijkiisa MacBook Pro ee Logic Pro X. Wuxuu u sheegayaa faahfaahinta shaqadiisa isagoo adeegsanaya awooda ay Apple bixiso
Shirkadda Spotify ayaa gaadhaysa 130 milyan oo qof oo bixiya lacag bixinta
Tirooyinkii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyay ee laga helay Spotify ayaa na tusaya sida adeegani uu ugu sii kordhayo kororka iyo soohdimaha gaaraya 130 milyan oo macaamiil ah
Marka ugu horeysa ee Beta ee barnaamijka Apple ee ka dhanka ah COVID-19 waa la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee Apple iyo Google ee wadajirka ah ayaa hadda la heli karaa si loogu soo dejiyo horumariyeyaasha iyada oo loo marayo XCode
Ku dheji daaqada Safari shaashad buuxda ama dhinacyada leh Split View
Shaqada 'Split View' waxay noo ogolaaneysaa inaan leenahay labo barnaamij oo isku mar ka wada furan shaashadeena si aan wax soo saar badan u yeelano
Khariidadaha Apple ayaa ku daraya goobo lagu tijaabiyo Covid-19 ee Mareykanka
Koobka 'Cupertino' waxay ku darayaan arjiga Khariidadaha meelaha ay adeegsadayaashoodu ku qaadi karaan imtixaannada si ay u ogaadaan inay leeyihiin iyo in kale Covid-19
11 × 33 Podcast: Mac-tii ugu horreysay oo ay la socoto ARM sannadka 2021
Waxaan dhammaantiin idinla wadaageynaa Podcast-ka Apple oo aan saacad ka wada hadalnay waxyaabaha muhiimka ah ee Apple toddobaadkan
Ku Darsiga iyo Daabacaadda Faallooyinka Bogagga, Nambarada, iyo Nuxurka
Markaad isla dokumeenti ka wada shaqeyneysaan dhowr qof oo wada shaqeeya, ka hor intaadan ...
Kuwani waa 13-ka Apple Stores ee furmi kara 1-da Maajo
1-da Maajo ee soo socota, waxay noqon kartaa taariikhda dib loo furayo ee dukaammada ugu horreeya ee Apple furayo ka dib faafka wali ku dhaca qof walba.
macOS: Sida si toos ah loogu furo App shaashad buuxda
macOS: Sida si toos ah codsi loogu furo shaashad buuxda. Kaliya waa inaad joojisaa hal tab oo ah goobaha 'macOS'.
Apple waxay yeelan doontaa faa iidooyin yar laakiin way sii fiicnaan doontaa
Toddobaadkan Apple waxay soo bandhigi doontaa natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca labaad waxaana la filayaa hoos u dhaca macaashka, sidii la filayay.
Wax soo saarka AirPods waa in la gooyaa iibka oo hooseeya
Sida ku cad macluumaadka cusub, AirPods waa inay yareeyaan wax soo saarkooda sababtoo ah hoos u dhaca iibka adduunka.
Sida loo muujiyo ilaha bogga websaydhka leh Safari
Si aan awood ugu yeelano helitaanka koodhka bogga shabakadda Safari, waa inaan marka hore dhaqaajino menu-ga soo-saaraha
Maajo waxay noqon doontaa bisha ay Apple furi lahayd dhowr dukaankeeda
Qaar ka mid ah dukaamada Apple ayaa dib loo furi karaa bisha May ee soo socota sida lagu sheegay war si qarsoodi ah uga soo baxay Deidre O'Brien
Apple iyo Google: Jarmalka, haa. UK, maya. Sababta
Waxaan sii wadeynaa inaan kusoo laabanno arjiga wadajirka ah ee Apple iyo Google ee ka dhanka ah COVID-19. UK waxay tiri maya. Shalay Jarmalka ayaa yiri haa.
Sida loo joojiyo koontadaada Zoom ee Mac
Sida aad si joogto ah u baajin karto xisaabtaada Zoom ee ku taal Mac.
Sida si otomaatig ah loogu demiyo kumbuyuutarkaaga gadaashiisa dhabarka dambe ee 'MacBook'
Sida si otomaatig ah loogu demiyo kumbuyuutarkaaga gadaashiisa dambe ee dhabarka ee 'MacBook'. Xitaa haddii ay yartahay, waxaan keydin karnaa xoogaa bateri ah oo aad gadaal uga baahan karto.
Sida loo arko dhammaan sawiradaada iCloud ee ku jira Mac iyo aaladaha kale ee Apple
Waxaan ku tusineynaa sida aad uga wada eegi karto dhamaan sawiradaada iyo fiidiyowyada aalad kasta qalab dariiqa iCloud.
Iibinta Porsche 935 midabbada Apple
Porsche 935 waxaa lagu iibinayaa midabada Apple oo dhowr jeer tartamo isboorti dhex maray 80-maadkii iyada oo aan guul badan laga gaarin.
Jarmalka wuxuu garab taagan yahay Apple iyo Google barnaamijkooda wadajirka ah
Sawirka kore waxaan ku aragnaa soo koobid sida wadajirka ah ee wada shaqeynta Apple iyo Google u shaqeyn doonaan. Taasi maxay…
AirPods 3 iyo AirPods Pro 2 ee 2021 sida ku xusan Kuo
Xanta ku saabsan AirPods 3 cusub iyo AirPods Pro 2 sida uu sheegayo falanqeeyaha caanka ah ee Ming-Chi Kuo. Waxay umuuqataa inay noqon laheyd waqtigii la sugi lahaa ilaa 2021
ARM on MacBook, Fraggle Rock ee Apple TV, iyo inbadan. Ugu fiican usbuuca ee SoydeMac
Hal usbuuc ka badan waxaan ku soo qaadaneynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee usbuuca waxaan ka imid Mac. Dhowr war oo muhiim ah dhamaadka bishaan Abriil
Pearl Jam's "Gigaton Visual Experience" oo ku saabsan Apple TV +
Pearl Jam's "Gigaton Visual Experience" oo ku saabsan Apple TV +. Fikirkii ugu horreeyay wuxuu ahaa in lagu sii daayo fiidiyaha tiyaatarada filimka, oo hadda aan macquul ahayn.
Cook wuxuu horeyba ugu adeegaa sidii "lataliye dhaqaale" Trump
Maamulaha guud ee Apple wuxuu cadeynayaa in dhaqaalaha Mareykanka uu si dhaqso leh uga soo kabsan doono dhibaatada uu la kulmi doono dhibaatada ka dhalatay. COVID-19 caafimaadka
Apple iyo Google: beta ugu horreeya ee barnaamijka wadajirka ah, usbuuca soo socda.
Codsiga wadajirka ah ee Apple iyo Google si loo joojiyo coronavirus, waxay umuuqataa inay diyaarinayso beta-keedii ugu horeeyay usbuuca soo socda.
Apple waxay ka caawin doontaa tafaariiqleyda Hindiya dhaqaale ahaan
Dhibaatada caafimaad ee uu sababay COVID-19 awgeed, Hindiya waxaa soo foodsaaray khasaaro dheeri ah. Apple waxay u bilaabi doontaa deeq lacageed tafaariiqleyda.
Shaqaalaha Apple ee carruurta leh sifiican ugama adka inay guriga ka shaqeeyaan
Ka shaqeynta guriga iyo carruurta kugu tiirsan waa hawl u baahan heshiis dhex mara shirkadda iyo shaqaalaha, si loo heshiiyo shaqada iyo daryeelka carruurta yar yar.
Skype waa la cusbooneysiiyay waxayna noo ogolaaneysaa inaan bedelno asalka wicitaanadeena fiidiyowga
Shaqadii ugu dambaysay ee Skype ay ku dartay noocdeeda Mac, waxay noo ogolaaneysaa inaan astayno asalka wicitaanadeena fiidiyaha.
Sida loogu Beddelo Fiidiyowyada qaabab kale oo wata VLC
Bakhaarka 'App App' ee 'Mac App Store' waxaan ku haynaa codsiyo badan oo noo ogolaanaya labadeenaba inaan ku ciyaarno fiidiyowyada ...
Apple waxay soo saartay boqol bilyan oo waxay dib u maalgelinaysaa lafteeda
Apple ayaa soo saartay $ XNUMX bilyan oo kaash ah sanadkii la soo dhaafay waxayna u isticmaali doontaa inay ku sii socoto sii kordheysa oo ka sii xoog badan sidii hore.
Podcast 11 × 32: iPhone SE iyo Keyboard Magic, labada daraf ee Apple
Hal usbuuc ka badan, kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Apple
Apple waxay ku xasuusinaysaa inay dhowaan noqon doonto Maalinta Hooyada
Apple horey ayey kuu xasuusineysaa in ugu dhakhsaha badan ay tahay Maalinta Hooyada iyo inaad faahfaahin ku heli karto astaanta daabacan ee tufaaxa
Bob Iger wuxuu mar kale la wareegayaa maamulka Disney
Dhibaatada caalamiga ah ee ay sababtay coronavirus, ayaa madaxii hore ee fulinta Disney wuxuu markale la wareegay maamulka shirkada.
Sonos waxay bilaabeysaa idaacado lacag la'aan ah
Sonos Raadiyuhu waa adeeg Sonos ah oo loogu talagay muusigga dhammaan isticmaaleyaasha ku hadla. Adeeg cusub oo bilaash ah oo ka socda shirkadda
Adeegyada Apple waxay gaarayaan dalal badan
Apple waxay sii wadaa balaarinta adeegyadeeda wadamada aduunka. Xaaladdan oo kale, ku dhow